दलेदाई... - संस्मरण - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
दलेदाई… – संस्मरण
लेखक : लेखापढी ३० माघ २०७७, शुक्रबार १८:११ मा प्रकाशित
‘ए भाई सरम छ सरम ? ” एउटा मान्छे नजिकै आएर सोध्यो। मैले पुलुक्क उसलाई हेरें। पोखराको सहिद चोकमा उ मसंग सरम खोजि रहेथ्यो। उसको अनौठो प्रश्नले कौतुहल बनायो। ‘के गर्ने होर मेरो सरम तपाईले ?” मैले उसलाई सोधें ।
‘बनार पैसो खानी !’ उसले भन्यो।
त्यो मान्छेको टाउकोतिर एउटा तार छिनेको जस्तो लाग्यो ।
‘काँटी आ हौ ?’ उसले फेरी सोध्यो ।
‘दोलखा’ मैले भने ।
‘क्यारना आको ?’ उसले फेरी सोध्यो।
ए ; भन्दै उसले मलाई एकटक नियाल्यो र बाँकाटे हान्यो ।
एयरपोर्टबाट म हिडेर ताल किनारतिर जाँदै थिए। सानो झोला भिरेको थिए , त्यो मैलो थियो । झुस्स दारी; कतै गाउँबाट कामको खोजीमा सहर झरेको मान्छे जस्तै म लखर लखर दायाँ बायाँ घर र घरमा झुन्डेका साईनबोर्ड हेर्दै हिडेको थिएँ ।
त्यो मान्छेले एउटा कालो झोला छड्के पारेर भिरेको थियो । मास्टरी जुत्ता , मास्टरी प्यान्ट, अलिकति दाइने ढल्केको ढाका टोपी। साच्ची भन्ने हो भने त्यो मान्छे नेता मास्टर जस्तै देखिथ्यो ।
मैले उसलाई अलिपरसम्म हेरें ।
उ एउटा कार्यालय भित्र छिर्यो ।
उसको सरम त त्यहाँ रहेछ ।
बिचरा श्रमको दलेदाई !!!
(पुष्कर शाह एक विश्व साइकल यात्री हुन् । दोलखाको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर हुर्किएका शाहलाई आज सबैले विश्व साइकल यात्रीका रूपमा चिन्छन् । शान्ति तथा सहअस्तित्वको सन्देश लिएर उनले विश्वका १५० मुलुकको यात्रा गरे । केही गरेर देखाउने उदेश्य राख्नेहरूका लागि पुष्कर शाह प्रेरणाका स्रोत मात्र होइनन्, एउटा विम्ब पनि हुन्। बिश्व साइकिल यात्रा पश्चात ”संसारलाई साढे पाँच फन्को ” नामक चर्चित पुस्तक लेखेका छन् , जसमा बिश्व यात्रामा देखेका, भोगेका अनेकौ संघर्षका जीवन्त स्मरणहरु समाबेश गरेका छन् ।)
“दलेदाई नामक छोटो तर गहिरो भाव समेटिएको उहाको एक स्मरण लेखका लागि हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछौ साथै निरन्तर सफलताको कामना गर्दछौ- हेरिटेज मिडिया नेटवर्क, लेखापढी म्यागजिन ”